SPINACH INTA LAGU GUDA JIRO UURKA: MACQUUL MA TAHAY IN LA CUNO XILLIYO GOOR HORE IYO GOOR DAMBE IYO SIDA LOO KARIYO, IYO SIDOO KALE FAA'IIDOOYINKA IYO ISKA HORIMAADYADA INTA AY SUGAYAAN ILMAHA - BEER CAGAARAN
Miyuu suurtogal ah in la cuno isbinaajka inta uu uurka leeyahay? Faa'iidooyinka, khilaafaadka iyo cuntooyinka
Cuntada oo dhan, isbinaajidku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee faa'iido u leh dumarka uurka leh iyo uurjiifka, maadaama ay ka kooban tahay iodine, folic acid, birta, borotiinka, la'aanta taas oo keenta xadgudub ka yimaada horumarinta xubnaha unugyada badan ee uurjiifka ah, iyo haween uur leh waxay gacan ka geysataa horumarinta dhiig yari iyo sunta .
Isticmaalka saxda ah oo joogto ah ee isbinaajka ayaa ka hortagaya qaar badan oo ka mid ah dhibaatooyinka uurka.
Spinach waa khudradda caleenta ah, taas oo ah il muhiim u ah nafaqooyinka dhammaan seddexda uurka; 200 garaam oo isbinaaj ah si buuxda u buuxiya nus maalin kasta ee haweenka uurka leh ee fitamiinada iyo macdanta.
Uurka waqtiga caadada hore iyo kan dambe
Saddexda bilood ee ugu horeeya, isbinaajka ayaa lagula talinayaa in la isticmaalo si habboon in la dhigo dhammaan xubnaha jirka ee uurjiifka ah isla markaana haysta kaydka tamarta xoogga leh ee haweenka. Fiitamiinada qeybtiisa (retinol iyo tokopherol) ayaa yareeya sumadaha sunta sunta ah iyo duufka dumarka uurka leh, folic acid waxay ka hortagtaa dhacdooyinka dhiig yari.
Xilliga saddexaad ee uurka, isbinaajka wuxuu ka caawiyaa inuu si joogto ah u buuxiyo yaraanta vitamin B ee lagama maarmaanka u ah horumarka habboon ee nidaamka dareenka uur-jiifka.
Saddexda saddexaad, isbinaajka ayaa ka hortagaya korriimada dhiig yaraanta dhiig-yaraanta, maadaama ay ku jirto qadar sare oo ion yar oo birta ah, taasoo ka kooban sagaal jeer ka sarreysa kuwa daroogada.
Faa'iidooyinka isbeddelka xilliga uurka waxaa lagu qeexaa sida ugu dhakhsaha badan ee fitamiinada, walxaha raadraaca iyo borotiinka jirka ee haweenta loo soo maro mandheerta loo maro ilmaha caloosha.
Saamaynta ilmaha caloosha ku jiraa waa mid wanaagsan oo leh isticmaalka saxda ah ee khudradda. Spinach ayaa si fiican u nuugo unugyada uurjiifka waxayna door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta iyo horumarinta unugyada iyo hababka cusub.
Per 100 garaam: Kalooro - 27 Kcal, borotiinka - 3.8 g, dufanka - 0.7 g, karbohidrates - 2.1 g, fiber - 4,5 g, biyaha - 87 g
Folic acid (3.7 mg) - ka hortagga dhiig yari, ilaalinta unugyada dareemayaasha ah ee waxyeello, horumarinta xuubabka unugyada. Spinach folic acid waxaa loo nuugay 90% ka sarreysa kaabayaasha daawada (5%).
Ascorbic acid (15 mg) - ka ilaalinta derbiga vascular, hagaajinta difaaca jirka, ka hortagga garaacista.
Faytamiin A (82 mg) - horumarinta saxda ah ee maqaarka iyo xuubka xuubka, unugyada muuqaalka iyo dareemaha indhaha.
Tocopherol (17 mg) - saameynta antioxidant, hagaajinta unugyada.
Faytamiin K (5 mg) - Xeerarka wadnaha iyo murqaha.
Iron (35 mcg) - horumarinta unugyada jidhka ee hemoglobin, isugeynta unugyada leh oksijiin.
Calcium (36 mg) - saaridda lafaha iyo kilyaha, hagaajinta xinjirta dhiigga.
Iodine (73 μg) - horumarinta qanjirrada iyo qanjirada "parathyroid". Iyadoo la'aanta iodine ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo xinjirnimada, bararka, miisaanka, xajmiga jirrada.
Protein waa qayb muhiim ah oo dhismaha ah. Marka la isku daro suxuunta hilibka, nuugista borotiinka waxay kor u qaadeysaa 100%.
Pectin iyo fiber fiber - waxay gacan ka geystaan ​​dhaqdhaqaaqa saxda ah ee mindhicirka, xajmiga sunta ah iyo metaboolada daroogada ee jidhka, kicinta shaqada qanjidhada gudaha.
Spinach waxay dhaawici kartaa jidhka hooyada haddii ay ka qabato habka kaadida iyo cudurka kelyaha. Protein dheeraad ah ee isbinaajka ayaa lagu hayn doonaa kelyaha oo ay waxyeello u geystaan.. Sidoo kale waa inaadan u adeegsanin cudurada beerka iyo saliingaha - xaddiyo badan oo asiidh organic ah oo ka kooban qaybta khudradda ayaa gacan ka gaysan karta sii xumeynta.
Oxalic acid ee qaababka isbinaajka xeryahooda oo leh kalsiyum iyo sababa sii xumaanaya habka loo yaqaan 'pathotherestealinal pathology' iyo horumarinta bararka.
Cudurada habka kaadida, kilyaha, beerka.
Cudurka boogaha Peptic.
Cudurka wadnaha ee wadnaha.
Laguma talinayo in la isticmaalo khudaarta tiro ka badan tan caadiga ah ee haweenka uurka leh.
Ha ku qaadin isbinaajka shakhsi ahaaneed.
In foomka saafi
In foomka saafi, isbinaajka waxaa loo isticmaalaa cusub iyo sidoo kale kulaylka-daaweyn.. Iyadoo aan loo eegin habka diyaarinta, haweenka uurka leh waxay isticmaali karaan wax ka badan 200 garaam oo isbinaaj ilaa 4 jeer toddobaadkii.
Qalalan, la qaboojiyey, la kariyey
Isbinaajka qalalan. Ka dib qalajinta, nolosha khudradda ee khudradda waxay ku kooban tahay laba sano. Cunto noocan oo kale ah ayaa lagu daraa hilibka iyo khudaarta cagaaran, marar badan sida maaddada maraqa.
Isugeynta barafaysan waxaa lagu kaydin karaa si aan xad lahayn. Isbaantiga noocan oo kale ah ayaa loo isticmaalaa diyaarinta suufka suufka, oo ah mid lagu daro maraqa, omelettes iyo saladh, tiro yar ayaa lagu daraa saafiga miraha ka dib marka la gooyo blender. Spinach mar dambe ma barafoobin.
Isku kariin la kariyey waa in la wada cunaa isla markiiba ka dib karinta. Diyaarso saxan isteetis gooni ah, fuud khudradeed, isku dar ah isbinaajka iyo khudaarta cagaaran.
Spinach ayaa ugu fiican ee la isku daray hilibka cas, solanaceae, basasha.
Qodobka tallaabo tallaabo tallaabada ah iyo habka codsiga. Casiirka cusub, baradho la shiiday, saladh, khudradda qudaarta, caleemaha, maraqa suufka, maraqa hilibka leh isbinaajka, casiirka khudradda, kaluunka kalluunka ayaa laga sameeyaa isbinaajka dumarka uurka leh.
50 garaam oo cusub oo la barafeeyey ama la qaboojiyey;
2 garaam oo cusbo ah;
50 ml oo caano ah oo aan caan ahayn;
15 ml oo khudradeed ama subag.
In baaquli, jebiyaan ukunta, ku dar caanaha, cusbo, whisk 3 daqiiqo.
Basasha jarjar xabadaha yar, ku rid caleemaha isbinaajka.
Ku rid weelka dabka, dabka, ku shub saliidda.
Ku shub walaaqa saliidda kulul.
Isku dar sulida iyo basasha 1 daqiiqo kadib, si siman u faafa qalabka alwaax.
Ka dib 3-4 daqiiqo, u celi omelet dhinaca kale 2 daqiiqo.
Isku qabo caleemaha kala badh ka dib 3 daqiiqo kadibna uga sii daa digsiga 1 daqiiqo kale.
Ku rid suxuun, cun cun.
Baradho la shiiday oo cagaaran
200 garaam oo caleemo cusub oo la barafeeyey ama la qaboojiyey;
20 garaam oo subag;
10 garaam oo bur ah;
150 ml oo ah kareem;
nutmeg oo ku taal mindida mindi;
cusbo, paprika iyo basbaas ay u dhadhamiyaan.
Spinach caleemo si ay uumi u jilciso.
Kaadi subagga digsi qaboojiye, ku dar bur, oo si joogto ah ugu walaaq leh qalab alwaax ah.
Isku dar kariimka iyo qudaarta, sii wad si aad u walaaqdo. Karkari 2 daqiiqo ilaa qaro weyn.
Ku dar caleemaha isbinaajka, isku kari 2 daqiiqo. Saliid, ku dar dhir kale oo dhadhan.
Isku dar walxaha ku jira sheyga si aad u ogaato bakeeriyada la shiiday, dib loo dhigo 1 daqiiqo.
Ku rid saxan, isticmaal diiran.
Waa maxay khudaarta kale ee caleemaha u fiican haweenka uurka leh?
Waxaa ka mid ah khudaarta cagaaran ee haweenka uurka leh, kuwan soo socda ayaa ah mid waxtar leh.:
waa in cagaarka loo dhigaa;
Ka hor intaadan isticmaalin, waa inaad barataa sida caadiga ah ee maalin kasta ee haweenka uurka leh, akhri khilaafaadka iyo hababka diyaarinta.
Spinach waa qudaar caafimaad leh oo la awoodi karo, fitamiinada ballaaran ee u oggolaanaya in loo isticmaalo dhammaan xilliyada uurka si looga hortago xaalado badan. Qodobka sare ee borotiinka iyo walxaha bayolojiga firfircoon ee ku jira waxay xaqiijin doontaa horumarka habboon ee unugyada dareemayaasha, wadnaha, muruqyada iyo xubnaha kale ee uurjiifka.
Khudradda ayaa leh habab badan oo wax lagu kariyo, taas oo keeneysa in ay cunto u sahlanaato oo ay ku raaxaysato.